Bit By Bit - Idebe ihe omume - 2.4 Research azum
Nyere iri a e ji mara nnukwu data isi mmalite ndị na pụta ụwa na-agaghị emeli nke ọbụna n'ụzọ zuru okè hụrụ data, ihe ụdị nnyocha azum ndị bara uru? Ya bụ, oleekwa otú anyị pụrụ ịmụta mgbe anyị na-adịghị ajụ ajụjụ ma na-adịghị na-agba ọsọ nwere? O nwere ike ịdị nnọọ na-ele ndị mmadụ enweghị ike iduga na-akpali nnyocha, ma nke ahụ bụ bụghị ikpe.
M na-ahụ atọ isi azum n'ihi amụta na observational data: agụta ihe, ịkọ ihe, na approximating nwere. M ga-akọwa onye ọ bụla n'ime ihe ndị a-bụ nke a pụrụ akpọ "research azum" ma ọ bụ "research Ezi ntụziaka," a kpọkwara m ga-atụ ha na ihe atụ. Ufodu usoro a na-abụghị apụta nanị ma ọ ịgwụcha agwụcha, ma ha na-eme weghara a otutu nnyocha na observational data.
Iji na-ese onyinyo na-ekwu na-eso, na-agụta ihe kacha mkpa mgbe anyị na-empirically adjudicating n'etiti amụma si dị iche iche chepụtara. Ịkọ, na karịsịa nowcasting, ike bara uru n'ihi na amụma eso ụzọ. N'ikpeazụ, nnukwu data enwekwu anyị inwe ike ime ka causal atụmatụ e mere si observational data.